Otú nyefee SMS si gam akporo ka PC
Ide ozi n'ekwe ntị na ozi bụ mara ezigbo mma ka ị na-aka na gị ezinụlọ, ndị enyi, ndị ọrụ ibe ya na ndị ọzọ. Mgbe i nwere ihe Android ekwentị, ị na-enweta na zipu ozi ederede bụla ugbu a na mgbe ahụ. Ụfọdụ ederede ozi na-zitere site na gị hụrụ, nne na nna ma ọ bụ enyi, bụ nke kwesịrị ncheta. Ụfọdụ nwere mkpa azụmahịa ọmụma, na ị ga-elekọta bụrụ na ị ga-ihichapụ ha na mberede.
Otú ọ dị, ebe nchekwa ekwentị ebe niile ozi ederede na-echekwara dị nta. Ọ pụtara na, ị ga-ọcha ahụ ederede igbe mgbe nile iji jide n'aka na ị pụrụ inweta na zipu ọhụrụ ozi ederede. -Atụle ihe ndị ozi ederede ọwọrọ a otutu gị, i nwere ike chọrọ nyefee ozi ederede site na Android ka PC tupu ihichapụ ha. Ebe a, isiokwu a na-agwa gị na ụzọ abụọ ime ya.
Method 1. Nyefee SMS si gam akporo ka PC na a na Desktọpụ Software
Method 2. Nyefee Android SMS ka PC na App
Ọzọkwa Reading: Olee otú Gụọ ihe ndị na SMS.xml on PC
Nyefee niile ma ọ bụ họrọ Android SMS ka PC na-azọpụta .xml ma ọ bụ txt faịlụ.
Na-enweta ma Send odide kpọmkwem site PC gị ezinụlọ, ndị enyi na ndị ọzọ.
Mark unreadable SMS ozi na eri ka na-agụ.
Ndabere Android SMS na kọmputa na otu Pịa.
Hichapụ achọghị ozi ma ọ bụ eri na-eme ka ụlọ maka ndị ọhụrụ.
Ofụri Esịt dakọtara na niile ewu gam akporo igwe, dị ka HTC, Google, Motorola, Samsung, Sony, na ndị ọzọ.
Cheta na:-ezipụ ozi bụ nnọọ dị na Windows version n'ihi na oge ịbụ.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị software na jikọọ na gị Android ekwentị na kọmputa
Na mmalite, download nri version nke MobileGo na kọmputa gị. Wụnye ya. Mgbe ahụ, ẹkedori ya na-eji eriri USB jikọọ gị Android ekwentị na kọmputa. Mgbe njikọ, gị Android ekwentị ga-egosipụta na isi window.
Dị ka a Windows onye ọrụ, ị nwekwara ike jikọọ Android ekwentị site WiFi. Ma, ị ga-n'aka na ị arụnyere kwesịrị-nwere MobileGo.apk faịlụ na gị Android ekwentị. Ọ bụrụ na, ibudata ma wụnye MobileGo.apk faịlụ. Mgbe ahụ, na-eji MobileGo.apk faịlụ ka iṅomi QR koodu na desktọọpụ MobileGo ime ka njikọ.
Rịba ama: Ma Windows na Mac nsụgharị na-arụ ọrụ a yiri nke ahụ. N'ihi ya, m nnọọ na-Windows version dị ka a na-agbalị. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, ị nwere ike na-eso nzọụkwụ kwa.
Nzọụkwụ 2. Copy Android Texts ka Computer
-Aga n'aka ekpe kọlụm na pịa SMS. Na SMS management window, họrọ ozi eri na ị chọrọ nyefee. Pịa Save dị ka ịzọpụta ozi gị PC na .xml ma ọ bụ .txt usoro.
E wezụga na desktọọpụ software, e na nwekwara ọtụtụ Android SMS ndabere ngwa ọdịnala nke ka ị na-azọpụta SMS on Android ekwentị SD kaadị na mgbe nyefee kọmputa. N'etiti ha, SMS ndabere & Weghachi guzo.
Nzọụkwụ 1. Gaa Google Play Echekwala na na ibudata SMS ndabere & Weghachi ngwa.
Nzọụkwụ 2. Launch na ngwa ma mgbata ndabere nkwado ndabere na mpaghara SMS ka SD kaadị gị Android ekwentị.
Nzọụkwụ 3. Ugwu gị Android ekwentị dị ka ihe mpụga ike mbanye site na iji eriri USB.
Nzọụkwụ 4. na kọmputa gị, ahụ gị na Android ekwentị na-emeghe SD kaadị nchekwa.
Kwụpụ 5. Chọta .xml faịlụ, ma detuo ya na kọmputa gị
Ọzọkwa Reading: Olee otú Gụọ SMS.xml on PC
Na-emekarị Android SMS ị nyefee ka PC na-echekwa dị ka .xml faịlụ, .txt faịlụ ma ọ bụ HTML faịlụ. Abụọ ikpeazụ formats-adị mfe ogugu. Iji na-agụ SMS.xml faịlụ, i kwesịrị isere nkwado si a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ - Notepad ++. Ọ bụ a free isi koodu nchịkọta akụkọ, ime ka ị na-agụ SMS.xml faịlụ conveniently.
Cheta na: Biko adịghị dezie .xml faịlụ mgbe eji Notepad ++. Ma ọ bụ, faịlụ nwere ike mebiri emebi.
Nyefee Android Ndi ana-akpo ka PC
Nyefee Android Photos ka PC
Nyefee Android Ndi ana-akpo ka Outlook
Ndabere Android ka SD Kaadị
Weghara Android ihuenyo na Nyefee na Computer
2 ụzọ nyefee Google kọntaktị na iPhone
Olee otú ka Wepụ Black Ogwe-enweghị rụrụ Ogo
> Resource> Nyefee> otú nyefee SMS si gam akporo ekwentị mkpanaaka na PC